Matongerwo eNyika, 04 Kurume 2018
Svondo 4 Kurume 2018
Kurume 04, 2018
VaChamisa Vanoti Vachavandudza Hupfumi hweNyika Kana Vakasarudzwa Kutungamira Nyika
Mutungamiri weMDC Alliance, VaNelson Chamisa, vanoti vacharwisa zvikuru nyaya yehuori, kupa simba kumatunhu pamwe nekuvandudza hupfumi hwenyika kana vachinge vakunda musarudzo dzegore rino.
Vanhu Vokuvadzwa Mumhirizhonga yeMDC-T kuBulawayo
Nhengo dzeMDC-T nhasi dzarwisana zvikuru kuBulawayo mapurisa akasheyedzwa. Mumhirizhonga iyi makuvara vanhu vakaendeswa kuchipatara.
Mhirizhonga Yosvibisa Zita reMDC-T
Vanhu vaviri vakuvara zvikuru uye motokari dzine chitsama kusanganisira yemumwe wevatevedzeri vemutungamiri weMDC-T, Muzvare Thokozani Khupe, dzapwanywa mahwindo mushure mekutemwa nematombo nezvidhinha.
Kurume 03, 2018
Vamwe Vechidiki muChinhoyi Votarisira Kuna VaChamisa?
Mumwe wevechidiki, VaGershem Dzoto, vati vange vasingaende kumisangano yezvematongerwo enyika, asi rwendo rwuno vachaenda kunonzwa kuti VaChamisa vachataura zvinobata vechidiki her
Sangano reDiaspora Care Forum Rinoparurwa muSouth Africa
Sangano reDiaspora Care Forum, Dicafo, raparurwa zviri pamutemo muJohannesburg kuSouth Africa nemunyarikani waro, VaAustin Moyo, pamwe nemukuru waro mutsva, VaSocks Chikowero.
Hurumende yaVaMnangagwa Inosvitsa Mazuva Zana Iri Muhofisi
Mutauriri webato reZAPU, VaIphithule Maphosa, vanoti zvisinei nekuvimbisa kwavo shanduko kunyanya mune zvematongerwo enyika, VaMnangagwa havana zvakawanda zvavaita pakuvandudza mitemo yakasiyana siyana zvikuru ine chekuita nesarudzo.
Zanu PF neMDC-T Zvopesana paDanho raVa Trump paZvirango
Mutungamiri America, vaDonald Trump, vanoti vari kuwedzera negore zvirango zvakatemerwa vakuru vakuru pamwe nemakambani anodyidzana nehurumende yemu Zimbabwe.
America Yoenderera Mberi neZvirango Zvayakatemerwa Zimbabwe
Mutungamiri weAmerica, VaDonald Trump, vanoti vari kuwedzera negore rimwe chete zvirango zvakatemerwa vakuru vakuru muZimbabwe pasi pemutemo weNational Emergencies Act.
Kurume 02, 2018
MDC Alliance Inodoma VaChamisa Kukwikwidza Musarudzo yeMutungamiri weNyika
MDC Alliance yadoma mutungamiri weMDC-T, VaNelson Chamisa, kuti vakwikwidze chigaro chemutungamiri wenyika zvichitevera kushaya kwaVaMorgan Tsvangirai.
Matare Omisa Kugadzwa kwaMambo weMandevere
Dare repamusoro remuBulawayo ramisa kugadzwa kwaVaBulelani Khumalo saMambo Lobengula mukumutsurudzwa kwehumambo hwerudzi rwemaNdebele kwange kuchida kuitwa muBulawayo.
Mutauriri weMDC-T, VaObert Gutu, Vanoti Ndivo Vachiri Mutauriri weBato
Mutauriri weMDC-T, VaObert Gutu, avo vanonzi vakambomiswa basa, vanoti vacharamba vachitaura vakamirira bato vachiti musangano wakaitwa neChina, hauna kuitwa pachitevedzerwa bumbiro remitemo yebato ravo.
Hurumende Yoronga Kufumura veMabhizimisi Vakaburitsa Mari Kunze Zvisiri paMutemo
Gavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Doctor John Mangudya vanoti mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vatambira chikumbiro chavo chekuti vambopa mavhiki maviri mabhanga evemabhizimisi vanonzi vakaburitsa mari zvisiri pamutemo nguva yekuti vagadzirise mapepa avo.